SAWIRKA MAANTA: Geellu xitaa uma naxayo saxafiyiinta (Sawir caddeyn ah) – SBC
SAWIRKA MAANTA: Geellu xitaa uma naxayo saxafiyiinta (Sawir caddeyn ah)
Saxafiyiintu waxay ka mid yihiin qaybaha ugu muhiimsan bulshada, waxaana bulsho kasta horumarkeeda laga dheehdaa hanaanka & horumarka ay kaga talaabsato qaybaha kala duwan ee saxaafada sida xoriyada saxaafadda & waliba warbaahinta casriga ah ee ka kooban Tv, Jaraa’id, Radio & waliba Internet-ka.
Dunida maalin walba waxaa ka dhaca tacadiyo kala duwan oo dhanka saxaafadda la soo gudboonaada, iyadoo dilalka, xariga iyo caburinta saxaafadu ay ka noqdeen wadamada dunida sadexaad heerkii ugu sareeyey mudooyinkii ugu dambeeyey.
Maamulada ama dawlada aduunka waxaa laga dheehdaa heerka kalsoonida iyo furfurnaanta siyaasada ogolaanshaha warbaahin xor u shaqeysa iyo waliba ilaalinta madaxbanaanideeda.
Sawirka maanta ee aan idiin soo xulnay wuxuu ka turjumayaa dhibaatada ay saxafiyiintu ku qabaan gudashada hawshooda u waramida bulshada aduunka iyadoo taasi ku lamaansan tahay tacadiyada joogtada ah.
Sawirkan sida aad aragtaan waxaa ka muuqdaa neef Geel ah oo nin saaran yahay oo waliba ul si xun ugu garaacaya, neefkaasi geella ah wuxuu dusha ka marey oo uu dardaray nin saxafi ah oo sawir qaade ah.
Dhacdadu waxay ka dhacdey magaalada Qaahira ee caasimada dalka Masar xili sanadkii hore rabshado looga soo horjeedo madaxweynihii la riday ee Masaarida Xusni Mubaarak ay dalkaasi ruxeen.
Dibadbax ka socdey fagaaraha Tahriir ee magaalada Qaahira oo ay ka qay galayeen boqolaal kun oo qof ayaa waxaa halkaasi tagey saxafiyiin kala duwan oo ujeedadoodu aheyd in ay dunida u gudbiyaan waxa halkaasi ka dhacaya.
Hadaba nin ka mid ahaa saxafiyiintii goobtaasi ku sugnaa ayaa waxaa gurada uga baxay oo dardaray neef geel ah oo uu watey nin ka mid ahaa dadkii banaanbaxa ka qayb galey, iyadoo saxafigaasi sida aad ku arki kartaan sawirka uu dhulka ku dhacay isaga iyo qalabkii shaqada ay halkaasi ku galeen halis isla markaana dhaawac uu soo gaaray saxafiga.
Dhacdadan oo dad badan ka yaabisay ayaa waxay muujinaysaa in xitaa xooluhu hadii ay jaanis ku helaan saxafiyiinta inaanay u aaba yeelin oo ay dardarayaan, waxaana la is oran karaa “Xitaa Geellu uma damqanayo saxafiyiinta dunida ee dhiban”.
Waa su’aalo la iswaydiin karo, maxaadse adigu ku cabiri laheyd oo fikirkaaga ah (Have your say) hoos comment-ga ku soo qor waxa ay kula tahay aragtidaadu ilaalinta xoriyada saxaafada iyo dhibaatooyinka soo gaaraya Mahadsanid.
Fiiro Gaar ah: Waxaan aad uga xunnahay in aan soo daabici wayno qaybo ka mid ah comments-ka dadku bixiyeen oo qaarkood ay xambaarsan yihiin virus halis galin kara hawlaha web-ka, iyadoo sababo amaanka farsamada Internet-ka aan u masaxnay fariimo aad u fara badan oo jawaab celin ah oo ay dad badan dhiibteen.~
qoraalkan waxaan ka fahmey in saxafiyinta dhabadan ka haysto dhanka dowladaha iyagoo kala kulma caadis ama hanjabaad.. ok .
aniga waxan qabaa dalkasta sharci buu leyahay, iskuna sharci mahan , saxaafadana waa midi labo afleh dhankaad wax ugu goyso. marka waxan qabaa in saxaafadu raacado ama ayado sharciga uyaal wadankaas,policyga dalkasna waa inay ku shaqayso.
markaas waxaa imaanaysa in saxaafadu ay ka nabad gasho tacayicada iyo dhibka, hadaanka hadlo dalka somaliya saxafadoodisa waxayaalo badan baa sahlaya in ay dhib soo gaarto, iyadoo wadanka aanay ka jirin sharci siinaya xuuquuda saxafiyiinta xadidayana shaqadisa iyo wadada uu kushaqaynayo oo ah wadanka policygisa in uu dhowro. kuna xad kudbin sharciga wadanka uyaal…
Yusuf Daacad says:
ASC waad salaaman tihiin ugu horeen salaan qiimo leh sharaf leh qadarin iyo xushmad ay ku dheehan tahay.
Runtii tacadiyada ama dhibaatooyinka loo gaysanayo saxaafada somalida waxa ay noqotey tusbax ooda laga furey runtiina waa wax laga xumaado tan kale dhib weyn bay iyaduna leedahay saxaafada waayo ninka saxafiga ah maanta ma ahan mid aqoon sii durugsan u leh howlaha saxaafada nin kasta oo maanta wax akhrin kara qori karana waxa uu yiri waxa aan ahay weriye marka labada dhinacba eedu way ka jirtaaa inkastoo dhibaatada loo gaysanayo ay badan tahay hadani anigu nin media aad u jeclaa baan ahaa runtii waana la shaqayn jirey dhanka INTERNETKA dhibta iyo dheefta ay leedahay oo aan la isku bar bar dhigi karin darteed baana fara oga qaadey saxaafad oo dhan oo hamigaygu ahaa in aan meel wacan ka gaaro oo magac iyo maamuus leh thanks ilaah baa mahad leh
Naf nool in la diloh waa dhib Saxafada Wakhatigakan Somalia ka Jirah Badankood qayab weyn bay ka qateen dhibka wadanka ka jirah.
Kuligood ma wada eed gelin ee qaarkood iyagoo Wanaagsamaynayah bay dhibato la kulmaan ama la Dilaa. mar hadii laga aamin baxay Saxafada Somalia waa in ay amaan kooda sugtaan hadii ay u bisil yihiin Sharciyada u Degsan shaqada ay Qabanayaan waa Fiicanaan lahayd.
duqa magaalada says:
waa arin cajiib ah suxufiyiinta godkoodaa biyo ugu galeen meelkasta oo ay joogaanba
Runtii aad ayaan uga naxay muuqaalka weriyaha ratiga la marsiiyay waana mid ka mid ah dhacdooyinka weriyaasha qabsata mid ka mid ah oo aad u xun. Thanks, said
waa run saaxafadu wax xaquuqa aduunka kuma haysato
geeliibaa haduu ini xasuuqaya ma dad baad naf ka sugaysaan alla halaag badanaa ilaahaw noo dhawr wariyaasha
GEELOOW GUMBULULAX BAAN MAQLI JIRAY LAKIIN GEEL CAMERA MAN KU DURDURINAAYO WAA CAJIIB WAXAAN MAQLI JIRAY IYADOO LA YIRAAHDO SUXUFUGA IYO PILOT IYO DHKHTAR HADII DAGAAL LAGU QABTO LOOLAMA DHAQMO SIDA KUWA KALE LOOLA DHAQMO BALSE TAAS SOMALIYA AYAA KA BEEN SHEEGTAY WAAD U JEEDAAN IN MAANTA WARIYE LAGU DILAY GLKCYO ALAAHA U NAXARIISTO AAMIIN